အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ခေတ်မီ Function တွေကို ကြော်ငြာတဲ့အခါမှာ Original Kick Sensor ဆိုတာလေးတွေ ပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီ Kick Sensor ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့် ကားတော်တော်များများမှာပါလာတဲ့ စနစ်လေးတစ်ခုမို့ ဒီစနစ်လေး အကြောင်းသိထားမယ်ဆိုရင် ကားတွေရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ ဗဟုသုတလေးတွေ ရရှိစေမှာပါ။
Kick Sensor ဆိုတာဘာလဲ ?
Kick Sensor ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် ဘာခလုတ်မှနှိပ်စရာမလိုဘဲ ခြေထောက်နဲ့ ကားနောက်ဖုံးကို အလွယ်အဖွင့် အပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါပဲ။ ထပ်ရှင်းပြရရင်တော့ ကျနော်တို့ ပစ္စည်းတွေသယ်မပြီး အဲဒီပစ္စည်းတွေကို ကားနောက်ဖုံး ထဲကို ထည့်မယ်၊ ကားနောက်ဖုံးဖွင့်ဖို့ လက်ကလည်း မအားဘူး၊ နောက်ဖုံးကို ဖွင့်ပေးဖို့၊ ကူပေးဖို့ ဘေးနားမှာ တယောက်ယောက်လည်း ရှိမနေဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ နောက်ဖုံးဖွင့်ဖို့ ပစ္စည်းတွေကို မြေကြီးပေါ်ချတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရပါတော့မယ် ။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ကားနောက်ဖုံးကို ခြေထောက်နဲ့ ဖွင့်လို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။
Kick Sensor တွေက ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ?
Kick Sensor ကို အခြေခံအားဖြင့် ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
၁။ Capacitive Kick Sensor
၂။ Ultrasonic Kick Sensor ဆိုပြီး ပုံစံနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Sensor နှစ်ခုစလုံးက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမတူတာသာဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတဲ့ အရာဝတ္တုတွေကို အာရုံခံပြီး Control System တွေအတွက် Waveform (လှိုင်းအလျားပြောင်းလဲမှုပုံစံ) တွေထုတ်ပေးတာ ကတော့ တူညီပါတယ်။
Capacitive Kick Sensor တွေက Electromagnetic Field ဆိုတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းတွေကို ထုတ် လွှတ်ပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းပြောင်းလဲမှုတွေကို အာရုံခံပြီး Waveform တွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းဖြင့် ဒီ Sensor နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စနစ်တွေကို အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။
Ultrasonic Kick Sensor တွေကတော့ Ultrasonic ဆိုတဲ့ လူတွေမကြားနိုင်တဲ့ အသံလှိုင်းအမြင့်တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး အဲ့ဒီအသံလှိုင်းတွေကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့ ပဲ့တင်သံတွေကို အာရုံခံပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူထုတ်လွှင့်နေတဲ့ အသံလှိုင်းကြားထဲကို ရောက်လာတဲ့ ပုံစံတွေကို ပဲ့တင်ထွက်လာတဲ့ အသံလှိုင်းရဲ့ ပုံစံကို အာရုံခံခြင်းဖြင့် အနိမ့်အမြင့် အရွယ်အစားပုံစံတွေကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိသည်အထိ အာရုံခံနိုင်အောင် တီထွင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေမှာတော့ Capacitive Sensor တွေထက် Ultrasonic Kick Sensor တွေကို အသုံးများကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေအချိန် အခါအမျိုးမျိုးမှာ အာရုံခံတဲ့အခါ Ultrasonic Kick Sensor တွေက ပိုပြီး အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားလို့ပါပဲ။ ဥပမာ အားဖြင့် ရေနဲ့ ဖုန်တွေ၊ ရွှံ့တွေ ပေကျံသွားတဲ့အခါ Capacitive Sensor တွေရဲ့ အာရုံခံနိုင်စွမ်းက နိမ့်ကျသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းကားတွေမှာတော့ Ultrasonic Senor တွေကိုပဲ ကားရဲ့ စနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် အာရုံခံဆင်ဆာတွေအဖြစ် အသုံးပြုတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Kick Sensor တွေကို ကားတွေမှာ ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်သလဲ ?
ဒီ Kick Sensor ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကားရဲ့ သော့က ကားရဲ့အနီးနား ပတ်ဝန်း ကျင်မှာရှိရပါတယ်။ ကားသော့ကို ပိုက်ဆံ အိတ်တို့၊ ဘောင်းဘီအိတ်တို့ ထဲကနေ ထုတ်စရာမလိုပါ။ ကားအနီးအနားမှာ သော့ ရှိနေတာနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကားရဲ့ နောက်ဖုံးဘန်ဘာ အောက် အလယ် ကို ခြေထောက်နဲ့ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းထိုး ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကားဘော်ဒီ ကို ထိအောင် ကန်စရာ မလိုပါဘူး။ တချို့ ကားတွေမှာတော့ Slide Door (ဘေး တံခါး) တွေအတွက်ပါ Kick Sensor တွေပါ ပါတယ် ။ ဒီလိုပါလာလို့ Slide Door တွေ ဖွင့်ဖို့အတွက် Slide Door တံခါးတွေ အောက်က Kick Sensor တွေကို ဒီလိုသွား လုပ်ပေးရပါမယ်။
ဒီလို Kick ပြီးတာနဲ့ တံခါးပွင့်လာမှာဖြစ်ပြီး တံခါးပွင့်တာနဲ့ လွတ်အောင် နောက်ကိုဆုတ်နေပေးပြီး တံခါးပွင့်လာအောင် စောင့် နေပေးပါ။
ပစ္စည်းတွေ နောက်ဖုံးထဲတင်ပြီးလို့ တံခါး ပြန်ပိတ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ခုနက Kick လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ခြေထောက်နဲ့ ၂ ချက် ကန်ပေးလိုက်ရင် တံခါးပြန်ပိတ်သွားမှာပါ။ တံခါးပိတ်တဲ့အခါ လူနဲ့မထိခိုက်စေဖို့ လူ ကို တံခါးနဲ့လွတ်အောင် နောက်ဆုတ်နေ ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းလေးကတော့ Tail Gate Sensor , Trunk Boot Sensor , One Foot Sensor , Smart Trunk Opener Sensor အစရှိသဖြင့် ကားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ၊ ကားအမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး နာမည်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ Kick Sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင် မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေ ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့အခါ ဒီလို ခေတ်မီ Function တွေပါလာတဲ့ အခါ မစိမ်းတော့ဘဲ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရသွား မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ခေတ်မီ မော်ဒယ်မြင့် ကားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေ အကြောင်းကို ဆက်လက်ကြိုးစားရေးသား သွားမှာမို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကို မောင်နှမများ အားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ နိုင်ကြပါစေဗျာ။
သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလကို ထပ်မံတိုးမြှင့်